Naya Post Nepal | ललितपुरमा अस्ट्रेलियाको पीआरका लागि नक्कली विवाह गर्दा यस्तोसम्म भयो, अचम्मलाग्दो घ”टना –हेर्नुस भिडियो
ललितपुरमा अस्ट्रेलियाको पीआरका लागि नक्कली विवाह गर्दा यस्तोसम्म भयो, अचम्मलाग्दो घ”टना –हेर्नुस भिडियो
काठमाडौँ । कहिले सोच्नु भाको छ बिदेशमा बस्ने सपनाले मान्छेलाई के सम्म बनाउन सक्छ भनेर हो आजको घ’ट’ना त्यस्तै रहेको छ | अस्ट्रेलियामा सँगै बसेका पुरुष र महिला काठमाडौँमा आए । साथीभाइ बोलाएर सामान्य ‘गेट टुगेदर’ गरे ।
४१ वर्षका दिलबहादुरको पत्नीसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन । उनी अष्ट्रेलिया गए । करिब १० वर्ष अस्ट्रेलियामा बस्दा उनले आफ्ना छोराछोरीलाई खर्च पठाउँथे । श्रीमती माइत बस्थिन्, उनीसँग कु रा हुँदैन थियो । हेर्नुस –
यो पनि ,,टन्सिल गलामा हुने एक स’मस्या हो, जो शारीरमा आयोडिनको कमीले हुन्छ । टन्सिल भएपछि गला सु’न्निने र दु’ख्ने गर्छ । यसले गर्दा खान पिउन गा”ह्रो हुन्छ । बोल्न पनि सहज हुँदैन । टन्सिललाई वे’वास्ता गरियो भने यसले ज’टिल’ ता नि’म्त्याउँछ ।
यद्यपी घरेलु विधी’बाट समेत यसको नि’दान खोज्न सकिन्छ । किन हुन्छ ? संक्रमणको का’रण टन्सिल हुन्छ । हुन त टन्सिल आफैमा खतरानाक स’मस्या होइन, यद्यपी यसको उपचार गरि एन भने धेरै दुख दिन सक्छ । उ’चित उपचारबाट यसबाट चाडै छुटकारा पाउन सकिन्छ । निम्न का’रणले टन्सिल हुनसक्छ ।
– चिसोको कारण, -पेटको स”मस्या, जस्तो कि ग्याष्ट्रिक, क”ब्जि यत, – तिख्खर स्वादको वा मसलेदार खानाले, – पा”चनयन्त्र कमजोर हुँदा, – चिसो र तातो खानेकुरा एकसाथ सेवन गर्दा, -चिसो चिज जस्तो कि, आइस क्रिम, कोल्ड ड्रिं”क धेरै खानाले
कस्तो हुन्छ ल”क्षण ? -गलामा पी”डा हुनु, -थुक निल्न गाह्रो हुनु । कुनैपनि खानेकुरा निल्न गाह्रो हुनु, -गला सु”न्निनु, – कान र गलाको मुनीको भागमा पीडा हुनु, – दुखा’ई’को का”रण ज्व”रो आउन सक्छ
के छ उपचार ? सामन्यत ट”न्सिलको समस्या केहि दिनको उपचारपछि आफै ठिक हुन्छ । तातो पानी पिउने, नुन मिसाइ एको तातो पानीले कुल्ला गर्ने प्रक्रियाबाट पनि यसमा राहात मिल्छ । यद्यपी कतिपय अवस्थामा यो सहजै नि’को हुँदैन । बरु, ज’टिल बन्दै जान्छ ।
एलोपेथिक उपचार के छ ? यदि भाइरल इन्फेक्सनको का’रण टन्सिल भएको हो भने र ज्वरो पनि आएको छ भने चि’कित्सक ले तपाईलाई प्यारासिटामोल वा क्रो’सिन नामको औषधी दिन सक्छन् । यस औषधीसँगै थोरै नुन मिसाइएको मनतातो पानीले कुल्ला गर्ने सल्लाह पनि दिइन्छ ।
यदि ब्याक्टेरियल सं’क्रमण’को का’रण यस्तो सम”स्या भएको छ भने केहि एन्टिबायोटिक औषधीसँगै प्यारासिटामोल पनि दि इन्छ । एलोपेथिक औषधी प्रयोग गर्नुअघि चिकित्सकको परा’म र्श लिनुपर्छ ।
यस्तो छ घरेलु उपचार विधी: – गाईको शुद्ध घिउले मसाज गर्नु पर्छ, टन्सिलमा रा’हात मिल्छ । -तातो पानीमा लसुनलाई मि” हिनसँग पिसेर हाल्ने । यसले केहि दिन मुख कुल्ला गर्नुपर्छ ।
– हर्बल चिया पनि टन्सिलको उपचारको राम्रो उपाय हो । ग्रीन टि, ल्वाङ–सुकुमेल र दालचिनिीको चिया पिउन सकिन्छ । -ट न्सिलको समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि गाजरको जुस पनि उपयोगी हुन्छ ।
-नुन मिसाइएको चियाको सेवनले टन्सिलमा राहात मिल्छ । -एक चम्चा बेसार तातो दुधमा राखेर पिउनुपर्छ । -कागती र महको मिश्रण तातो पानीमा मिसाएर सेवन गर्नुपर्छ ।
२०७८ चैत्र १०, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 1965 Views